Iwe | Ọkọwa Okwu Ahụike
Masshịa aka na Aromatherapy
Masshịa aka na Aromatherapy - Mkpa ya na Uru Ahụike.
Aromatherapy bụ sayensị nke ji ike ịgwọ ọrịa nke mmanụ dị mkpa. Mmanụ dị mkpa na-esi ísì ụtọ site na ihe ọkụkụ sitere na osisi. Osisi ndị a na-emepụta ọtụtụ mmiri phyto eke. Ya mere, mmanụ dị mkpa nwere mmetụta ọgwụgwọ dịgasị iche iche n'uche, anụ ahụ na mmụọ.
Kwadebe n’iru iwelata nsogbu ezumike gị site na nsogbu nri
Kwadebe n’iru iwelata nsogbu ezumike gị site na nsogbu nri.
Oge ezumike kwesịrị ịbụ oge ọ withụ na ndị enyi na ezinụlọ. Mana ezumike lekwasịrị anya na nri nwere ike ime ka ndị nne na nna ụmụaka nwere nsogbu nri. Ndụmọdụ ndị a ga - enyere gị aka izere mmeghachi omume nfụkasị nri n'oge ememe.
Uru 8 Colloidal Gold - ShopFreeMart Ọcha Gold
Nlekọta nke ọla edo Colloidal - shopFreeMart Dị Ọcha ọla edo ịta ahụhụ ™
ShopFreeMart Pure Gold Concentrate ™ bụ ezigbo ọla edo nano teknụzụ dị elu nke nwere ike ịnye ụfọdụ uru ahụike.
Nleta Colloidal Gold Na Nri.
Onweghi onye na-ekwu maka ọla edo dị ka ihe na-edozi ahụ anyị chọrọ na nri anyị kwa ụbọchị, mana m kwere na ọ bụ.
Ahụ mmadụ na-anabata ọla edo ngwa ngwa mgbe ọ kpọtụrụ akpụkpọ, asịrị, na mmiri na akwara ndị ọzọ ma anụ ahụ na-ebugharị ọla edo na akụkụ ụfọdụ na anụ ahụ.
Nchegbu Mgbu Na Ọgwụ Ahụike Nchekasị
Harry Nwere ike 7, 2019
Nchegbu Mgbu Na Ọgwụ Ahụike Nchekasị. Nchekasị (a na-akpọkwa angst ma ọ bụ nchegbu) bụ ọnọdụ akparamaagwa nke anụ ahụ na akụkụ akụkụ nke e ji mara somatic, mmetụta nke mmụọ, ọgụgụ isi na akparamagwa. Ọ bụ mmetụta na-adịghị mma nke egwu na nchebara echiche.